परमाणु बमले पनि कुनै क्षति पु¥याउन नसक्ने घर निर्माण « News24 : Premium News Channel
२५ श्रावण २०७६, शनिबार
परमाणु बमले पनि कुनै क्षति पु¥याउन नसक्ने घर निर्माण
एजेन्सी । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको बारेमा त पक्कै सुन्नु र देख्नुभएको होला । तर, कहिले तपाईले परमाणुबाट समेत कुनै क्षति नपुग्ने घरको बारेमा सुन्नुभएको छ ? आफ्नो घर सुरक्षित होस् भन्ने चाहना कसलाई पो नहोला र ?
विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित घरको बारेमा चर्चा गरिरहँदा पोल्याण्डमा एउटा यस्तो घर छ, जुन परमाणुले समेत कुनै असर गर्दैन । पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा बस्ने एकजना व्यक्तिले निकै सुरक्षित घर बनाउने योजना बनाए र त्यसको जिम्मा पोल्याण्डको चर्चित आर्किटेक्चर फर्म केडब्ल्यूके प्रोम्मले लियो ।
उनको माग अनुसार कम्पनीले यस्तो घर बनाइदियो की जसले संसारलाई नै अचम्मित पारिदियो । यो घरको सबैभन्दा ठूलो विशेषता त के छ भने एउटा बटन दबाउँदा बित्तिकै यो घर तल–माथि, अघि–पछि सबैतिरबाट कंक्रिटका पर्खालले बन्द हुन्छ ।
त्यसरी छोपिँदा यो घर कुनै बन्द किल्ला जस्तो देखिन्छ । जब यो घर एकपटक बन्द भएपछि लाखौँ कोसिस गर्दापनि यो घरभित्र कोहीँ छिर्न सक्दैन । यो घरमा छिर्नका लागि केवल दोश्रो तल्लामा बनेको पुलको प्रयोग गर्नु पर्दछ, त्यो पनि घरको मालिकले चाहेमा मात्र । यो घर पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि यसलाई परमाणु बमले पनि कुनै असर नपार्ने बताईएको छ ।
‘एलियनले मानिससँग सम्पर्क गर्न खोजेको’ भन्ने रिपोर्ट चीनले किन हटायो ?
एजेन्सी । के एलियनहरूले मानिससँग सम्पर्क गर्न खोजेका छन् ? यदि चीनको दाबीलाई विश्वास गर्ने
२ असार २०७९, बिहीबार
अप्टिकल इल्युजन : याे भ्रामक तस्वीरमा तपाईंले के देख्नुभयो ?
काठमाडौं । कहिले काँही कुनै तस्वीरमा देखिएको कुरा वास्तवमा सत्य हुँदैन । त्यसलाई बुझ्नका लागि
आजको मिति ‘प्यालिन्ड्रोम’ र ‘एम्बिग्राम’ दुवै !
काठमाडौं । मानिसहरुले आजको अंग्रेजी मिति २२/०२/२०२२ लाई विभिन्न कारणले याद गर्ने भएका छन् ।
१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार
टीभी स्क्रिनमा चाटेरै खानेकुराको स्वाद चाख्न सकिने ! (भिडियाेसहित)
एजेन्सी । जापानमा एक अनौठो टीभी आविष्कार भएको छ । त्यहाँका एक प्राध्यापकले निर्माण आविष्कार
एक लाख ७० हजार घुससहित सव इञ्जिनियर पक्राउ
कप्तान सन्दीप लामिछानेले लंका प्रिमियर लिग खेल्ने
नक्कली नोटसहित सर्लाहीका ठाकुर र यादव पक्राउ
विनोद शाही हत्या प्रकरण : मेयर चलाउनेसहित ३ जनामाथि मुद्दा नचल्ने !
धनुषामा आलुको बोरामा भेटियो ८३ लाख रुपैयाँ, दुईजना पक्राउ